Laba felokazi abebehlangene eBessie Head Library ngoLwesibili ukuzocetshiswauMasipala uMsunduzi ngezindlela zokuzisungula imiphilandawonye (cooperatives) bathi amalungelo abo awakamuleki kahle, ikakhulukazi emasontweni nasezindaweni zamakhosi.
Uthe: “Ukuhlukunyezwa kwabafelokazi, ikakhulukazi ondlunkulu nabafelokazi babafundisi ingqinamba enkulu esibhekene naso.
“Kwesinye isikhathi abanye bagcina bephelelwe indawo yokuhlala, amabandla esewufuna la umuzi. ONdlunkulu abakwazi ngisho ukuzithathela izinqumo ngemingcwabo yabayeni babo ngenxa yokuthi kusuke kukhethwe abantu abazobamela. Uthola yonke into seyenganyelwe ibandla noma umkhandlu wenkosi, kukhohlakale ukuthi nabo kumele bazithathele izinqumo.
UMtshare uthe phezu kwezinselelo abanazo bayafisa ukusungula imiphilandawonye emkhakheni wokuthunga, ukulima nokufuya ukuze baxoshe indlala.
Uthe: “Njengomkhandlu sizosebenzisana nale nhlangano ukubafukula nokubacebisa ukuthi bangazisungulela kanjani imiphilandawonye yabo.
Kubalulekile ukuthi uma sithuthukisa isizwe, abesifazane bangashiywa ngaphandle njengoba beyimigogodla yamakhaya abo.
“Ngaphandle kwemiphilandawonye, zizophinde futhi sibacije ngamakhono ahlukahlukene ukuze bakwazi ukuzimela